Akwụkwọ Wesley Faulkner na Martech Zone |
Edemede site na Wesley Faulkner
Ahụmahụ Wesley Faulkner metụtara ọtụtụ akụkụ nke ụlọ ọrụ teknụzụ, site na nrụpụta na mmepe ngwaahịa. Ebumnuche ya maka teknụzụ kwalitere site na afọ iri na atọ nke ahụmịhe na nkwado ọrụ teknụzụ na ndị ahịa, njikwa injinia, na mmepe mgbasa ozi dijitalụ. N'oge na-adịbeghị anya, Wesley abanyela na ngalaba mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ bụ onye ọbịa agbapụtara na ọtụtụ ntanetị mgbasa ozi dịka CNET na Tech na Twenty. Dịka akụkụ nke Ndụmọdụ Mgbasa Ọha, na mgbe ahụ dị ka onye na-agbasa ozi mgbasa ozi Social Media ọ nyere aka na mmepe nke usoro mgbasa ozi mgbasa ozi AMD ma nyere aka iwebata mmekọrịta azụmahịa ọhụrụ.
Ebee ka Wesley nọ? Ihe ịga nke ọma SXSW na obere mmefu ego
Saturday, April 30, 2016 Friday, April 29, 2016 Wesley Faulkner
N’ebe SXSW nọ n’azụ anyị nso nso a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anọdụ ala n’ime ime ụlọ na-ajụ onwe ha, gịnị kpatara na anyị enwetaghị mkpịsị ụkwụ ọ bụla na SXSW? Ọtụtụ na-eche ọbụna ma ọ bụrụ na nnukwu ego ha mefuru bụ naanị ihe efu. Dị ka mecca maka ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka teknụzụ, ọ bụ ebe zuru oke maka ịmatakwu akara, mana gịnị kpatara ọtụtụ ụlọ ọrụ ji daa na nnọkọ nnukwu teknụzụ a? Statistics maka SXSW Interactive 2016 Interactive Festival Sonyere: 37,660 (si